Mudaharaad balaadhan oo maalinkii Labaad Addis ababa kasocda. | ogaden24
Mudaharaad balaadhan oo maalinkii Labaad Addis ababa kasocda.
Sep 7, 2018 - Aragtiyood
Magaalada Addis ababa ee xarunta Gumaysiga Itobiya ayaa saaka ku Waabariistay mudaharaad balaadhan oo xayiray Qaar-kamida Jidadka muhiimka ah waawayn ee magalada.
Mudaharaadkan oo soo bilaabay maalinimadii shalay ayaa waxaa dhigaya Bulshada loo Yaqaano Raya oo Asal ahaan kasoo Jeeda Axmarada, waxayna Qomiyadani kacabanaysaa cadaalad-daro ay sheegeen inay kala kulmeen mamuladii kala dambeeyay ee soo maray Itobiya.
Mudaharaadayaasha Maalinkii Labaad ku Guda Jira mudaharaadka ee Qomiyada Raya ayaa kudoodaya inay dulmi badan kala kulmeen maamuladii kahoreeyay kan Abiy, oo sida ay sheegeen ku Khasbay inay kamid noqdaan Gobolka Tigrey oo Af iyo dhaqan toona aysan lawadaagin, isla markaanu uu kadhaxeeyo looltan dhinaca dhulka ah.
Maamulkii wayaanaha ee Zinawi ayaa si Khasaba qoomiyada Raya ugu daray Gobolka Tigrey, waxayna qoomiyadu Wajahday sida ay kudoodayaan dhibaatooyin badan intii lagu daray Gobolka Tigrey.
Mudaharaadayaasha bulshada Raya ayaa sheegay in dadkoodii maxaabiista ahaa ee maamulka Tigreega u xidhnaa ay wali xidhan yihiin halka dadkii kale ee Itoobiyaanka ahaa ay kafaa’iidaysteen cafiskii guud ee Abiye Axmed, sidaa darteedna ay Waajib tahay in mamulka Abiy uu Qaado Talaabo lagu bad baadinay Guud ahaan bulshada Raya oo kujirta xaalad adag sida ay Hadalka u dhigeen.